မိသျောရဲအိုး – My Blog
ကလငျ” “ကလငျ” ခေါငျးလောငျးသံကွောငျ့ သျောသျောစမျးတဈယောကျကောငျးခနျးရောကျမှမီးပွတျသှားရသညျ။အိမျမှာဘယျသူမှမရှိတုနျး အောကားကွညျ့ပွီး အမှနျအကနျသှားတိုကျနတော ခေါငျးလောငျးသံကွောငျ့ဖီးငုတျသှားရခွငျးပငျ။ “အရေးထဲဘယျသူလဲမသိပါဘူး” တီဗီကိုပိတျပွီး အပွငျကိုထှကျကွညျ့လိုကျတော့ သူ့အဈကိုဝမျးကှဲ မငျးမငျးရောကျလာတာဖွဈသညျ။သျောသျောစမျး၏ အဒျေါဘကျမှ စပျပါမှ တျောသော ဆှမြေိုးဆိုပမေယျ့ ငယျငယျတညျးက သူ့ကို အလိုအလိုကျဆုံးမို့အဈကိုတှထေဲမှာ မငျးမငျးကို အခဈြဆုံးဖွဈသညျ။
“ကိုကွီးပါလား လာလေ ပျေါမလာတာတောငျကွာပွီ ဖုနျးလညျးမဆကျဘူး နမေကောငျးမြားဖွဈနလေားဆိုပွီးစိတျပူနကွေတာ ခုရော အလုပျကိစ်စနဲ့လာတာပဲလား” “လာမလို့ပါပဲ အလုပျတှရှေုပျနလေို့.အိမျသားတှအေားလုံးလညျးသတိရပါတယျ အထူးသဖွငျ့ ငါ့ညီမလေးကိုပေါ့ အဲဒါကွောငျ့လညျး အလုကျကိစ်စအကွောငျးပွပွီးတမငျလာတာ ” “ခုမှလာပွောနတေယျ သူမြားကို ဖုနျးမဆကျပဲပဈထားပွီးတော့” “တကယျမအားလို့ပါ စိတျမကောကျနဲ့တော့ မုနျ့တှအေမြားကွီးဝယျလာတယျ” “မုနျ့ကြှေးရုံနဲ့ မရဘူး ညီမလေးသှားခငျြတဲ့နရောတှကေို လိုကျပို့ပေးရမယျ” “ကောငျးပါပွီဗြာ လိုကျပို့ပေးမယျဟုတျပလား ” “ဟေး ဒါမှတို့ကိုကွီးကှ” သျောသျောစမျးတဈယောကျပြျောသှားပွီး သူ့အဈကိုကို အနမျးတဈပှငျ့ပေးပွီး ဂုဏျပွုလိုကျသညျ။ကိုကွီးထမငျးမစားရသေးဘူးမဟုတျလား ညီမလေးခူးလိုကျမယျနျော” “အေးအေး ထမငျးအရငျစားလိုကျမယျ နောကျမှရခြေိုးတော့မယျ”
“ဒါနဲ ခုဏက အိပျနတောလား ဘယျသူမှလညျးမရှိကွဘူး ဘယျသှားကွလဲ” “ညီမလေးပငျြးလို့တီဗီကွညျ့နတော အဖကေကွီးကွီးနမေကောငျးလို့ရှာပွနျသှားတယျ အမနေဲ့ဒျေါလေးကတော့ထုံးစံအတိုငျးဗဒေငျဆရာဆီ သှားကွလရေဲ့ ” “သူရရောလိုကျသှားတာလား” “မောငျလေးလား မလိုကျပါဘူး သူ့သူငယျခငျြးတှနေဲ့ဘုရားဖူးသှားကွတာ မနကျဖွနျမှပွနျရောကျမယျ” သျောသျောစမျးထမငျးပှဲပွငျရနျထှကျသှားတော့ မငျးမငျးလညျးတီဗီကိုဖှငျ့ကွညျ့လိုကျမိသညျ။
အဖွူကောငျနှငျ့ကောငျနှငျ့ကောငျမတဈယောကျပယျပယျနယျနယျလိုးနကွေပုံကပျေါလာ၏။မငျးမငျးအံ့သွသှားရသညျ။မိသျောက အရှယျရောကျနပွေီဆိုပမေယျ့ ဒီလိုကားတှကွေညျ့လိမျ့မညျဟုမထငျထားခဲ့။ခုတော့ သူ့ညီမကွညျ့နတော ရိုးရိုးအခဈြဇာတျကား မဟုတျပဲ ပှငျ့လငျး အခဈြဇာကွမျးဖွဈနသေညျ။သူလညျး အသှေးနဲ့အသားနဲ့ဆိုတော့ကွညျ့ခငျြရှာမပေါ့လလေို့ဖွတှေေးပွီး ကွညျ့လကျစဇာတျကားကို ဆကျကွညျ့နမေိတယျ။ “ကိုကွီး ထမငျးစားမယျ” မိသျောရဲ့ချေါသံကွောငျ့ မငျးမငျးတီဗီကိုပိတျခဲ့ပွီး ထမငျးစားခနျးဆီထှကျခဲ့လိုကျသညျ။ထမငျးစားခနျးရောကျမှမိသျောကိုအသအေခြာကွညျ့မိတော့သညျ။
အိမျနရေငျးမို့ထငျပါရဲ့ မိသျောတဈယောကျ အတှငျးခံအတှငျးခံမပါဘူး။ဝတျထားတဲ့တီရှပျပါးပါးလေးအောကျမှာ နို့သီးခေါငျးလေးတှကေို မွငျနရေတယျ။မငျးမငျးလညျးစိတျရိုငျးတှဝေငျလာပွီး မိသျောကို နောကျကနပှေဖေ့ကျလိုကျတယျ။ “မိသျောအရမျးခြောလာတယျ” “ကိုကွီးကလညျးမွှောကျနပွေနျပွီ..မခြောဘူးပွောလညျး ထမငျးကြှေးပါတယျနျော” အဲလိုပွောနရေငျးပဲ မိသျောဆီကခေါငျးလြှျောရညျနံ့ သငျးသငျးလေးတှရေယျ၊စကပျတိုလေးအောကျက တငျးသားနုနုအိအိလေးတှရေဲ့အထိအတှတှေ့ကွေောငျ့ မငျးမငျးရဲ့ငပဲက အမောကျထောငျလာလသေညျ။
မိသျောလညျး ငပဲကွီးရဲ့မာကြောတဲ့အထိအတှကွေ့ောငျ့ပဲ အဖုတျထဲမှာအရညျတှစေိုလာပွီး မခံမရပျနိုငျဖွဈလာတော့၏။ … ပထမဆုံးစရေးတဲ့ဇာတျလမျးမို့အမှာအယှငျးမြားရှိခဲ့လြှငျသျောလညျကောငျး၊အရေးအသားမြားညံ့ဖငျြးနလြှေငျသျောလညျးကောငျး အထူးတလညျတောငျးပနျပါ၏။အပျေါတနျးကို သှားခငျြလှပါသောကွောငျ့ အပေါငျးဗုတျကလေးမြားခြီးမွှငျ့မှုကိုစောငျ့မြှျောလကျြပါ.. မငျးမငျးကမိသျောလညျတိုငျကို ဖှဖှလေးနမျးလိုကျတဲ့အခြိနျမှာ မိသျောမကျြလုံးလေးတှစေငျးပွီး ဖငျလေးကိုကော့ကာ မငျးမငျးရဲ့လီး ကိုပွနျပှတျပေးနမေိတယျ။ မငျးမငျး လညျး မိသျောရဲ့တီရှပျအကငြ်္ီအောငျကို လကျလြှိုထညျ့ပွီး နို့တှကေို ပှတျပေးတာပေါ့။အပြိုစငျနုနုထှတျထှတျရဲ့နို့မို့ကိုငျလို့အရမျးကောငျးတယျ။နို့သီးခေါငျးတှကေ တဖွညျးဖွညျးနဲ့ထောငျတကျလာတယျ။
မငျးမငျးရဲ့လီးကလညျးဘောငျးဘီပေါကျထှကျမတတျမာနျတကျနပွေီမို့ ထမငျးဝိုငျးကို အုပျခဲ့ကာ မိသျောကိုပှခြေီ့ပွီး အိပျခနျးဆီခြီတကျခဲ့လိုကျသညျ။အခနျးထဲရောကျတော့နှဈယောကျလုံး ဝတျလဈစလဈဖွဈသှားပွီး မိသျောက ကုတငျပျေါမှာပကျလကျကလေး။မိသျောရဲ့အကွညျ့တှထေဲမှာ မငျးမငျးရဲ့လီးကိုဆာလောငျတောငျ့တမှုတှပေါနတေယျ..အမှေးရိတျထားတဲ့စောကျဖုတျဖွူဖွူဖောငျးဖောငျးလေးမှာ စောကျရညျတှစေိုရှဲနတောအမြားကွီးပါပဲ။ မငျးမငျးရဲ့ပွဲလနျနတေဲ့ဒဈကွီးကို မွငျတော့ မိသျောတဈခကျြတှနျ့သှားပမေယျ့ အဲဒီလီးကွီးစောကျစိလေးကိုပှတျပေးခံရတဲ့အခါမှာတော့ ကွောကျစိတျတှပြေောကျပွီး ညညျးသံလေးတှထှေကျလာတော့သညျ။မိသျောက အလိုးခံခငျြစိတျတှမေုနျယိုနတောသိတော့ မငျမငျးလညျး အခြိနျဆှဲမနပေဲသူ့ရဲ့ကွီးမားလှတဲ့လီးကွီးကို စောကျဖုတျထဲထိုးထညျ့လိုကျတော့တယျ။
လီးကွီးက မဝငျပဲထဈနသေညျ။သခြောသှားပွီ..မိသျောရဲ့ပနျးဦးကို သူစားသုံးရတော့မညျ။မိသျောကိုလှမျးကွညျ့လိုကျတော့ အံကွိတျထားပွီး ဝငျလာမယျ့ ညီလေးကိုစောငျ့မြှျောနတေယျ။မငျးမငျးက ခကျြခငျြးမထညျ့သေးပဲ အာရုံပွောငျးသှားအောငျ နို့စို့ပေးလိုကျတယျ…ခဏကွာမှ ဆတျခနဲဆောငျ့သှငျးလိုကျတော့ မိသျောဆီက “အား” လို့အျောသံတဈခကျြထှကျလာတယျ “နာလို့လား မိသျော” “ရတယျကိုကွီး မွနျမွနျလုပျပါတော”့ လို့မိသျောက ပွောပမေယျ့ သူ့ခမြာနာလှနျးတော့ မကျြနှာလေးကမဲ့နတေယျ။
မငျးမငျးက မိသျောကိုသနားတာကွောငျ့ တဝကျလောကျဝငျနတေဲ့လီးကိုဆကျမသှငျးသေးပဲ နှုတျခမျးလေးကိုဆှဲစုပျပွီးလြှာနဲ့ကလိပေးနမေိတယျ..လကျတှကေလညျး မိသျောတကိုယျလုံးကို ပှတျသပျပျေါ၇ငျးပေါ့..ပွီးမှ ဖွညျးဖွညျးခငျြးအသှငျးအထုတျ လုပျလိုကျတယျ..မငျးမငျးက နှဲ့သှငျးလိုကျ မိသျောက အျောလိုကျ ညညျးလိုကျနဲ့ ထညျ့လိုကျတာ မိသျောရဲ့စောကျဖုတျထဲကို လီးကွီးတဈဆုံးဝငျသှားတဲ့အခြိနျမှာ နှဈယောကျလုံး ခြှေးတှရှဲနကွေပွီ။လီးတဆုံးဝငျသှားတော့ မငျးမငျးက အရှိနျနညျးနညျးမွှငျ့လိုကျတာတယျ..အကွောပွိုငျးပွိငျးနဲ့သနျမာလှတဲ့လီးကွီးရဲ့စောကျဖုတျအတှငျးသားတှကေိုပှတျတိုကျမှုကွောငျ့ မိသျောတဈယောကျ ခံစားမှုရသတှတေကျလာကာ ညညျးသံလေးတှထှေကျပျေါလာတော့တယျ.
အပြိုစငျလေးရဲ့စောကျဖုတျစီးစီးလေးကိုလိုရတဲ့မငျးမငျးလညျး စောကျဖုတျအတှငျးသားတှရေဲ့ဆှဲစုပျမှုကွောငျ့ပွီးခငျြစိတျကိုမနညျးထိနျးထားရတယျ..ဆောငျ့လိုကျတိုငျး ဆောငျ့လိုကျတိုငျး မိသျောက အောကျကနကေော့ကော့ပေးနတောမို့လုပျရတာဟနျခကျြညီလှသညျ..ပွီးတော့ လီးနဲ့စောကျဖုတျထိလိုကျတိုငျး တပွှတျပွှတျနဲ့ထှကျပျေါလာတဲ့အသံတှကေလညျး နှဈဦးလုံးရဲ့ကာမစိတျတှကေို ပိုပွီးပွငျးထနျလာစပွေနျသညျ… “ကိုကွီး ကောငျးတယျ ဆောငျ့ဆောငျ့” “သှကျသှကျလေးဆောငျ့” မိသျောကအရှိနျမွှငျ့ဖို့စဆေ့ျောလာတာမို့မငျမငျးလညျး အရှိနျကိုတငျကာခပျပွငျးပွငျးလေးအားရပါးရဆောငျ့ပေးလိုကျသညျ..
“အငျး …အငျး..ကောငျးတယျ..ကောငျးတယျ..သှကျသှကျလေး ပွီးတော့မယျ…ပွီးတော့မယျ” “ဟငျးးး………..” မိသျောတဈယောကျသကျပွငျးခပြွီး ငွိမျကသြှားတော့ မငျးမငျးလညျးစိတျကိုလှတျပွီး အသားကုနျကွုံးပဈလိုကျတာ သူလညျးပွီးသှာတော့တယျ။နှဈယောကျလုံး ဆန်ဒတှပွေညျ့ဝသှားကွပွီဆိုတော့ တဈယောကျကိုတဈယောကျဖကျပွီး ကုတငျပျေါမှာ ခဏအနားယူလိုကျကွသညျ။ … စာရိုကျတာမမွနျတာမို့ပို့ဈတငျတာနှေးနရေတာကို ခှေးလှတျကွပါ….သနားသောအားဖွငျ့လညျး ဗုတျမြားစောငျမကွပါဗြို့“မိသျော ကောငျးလား” “သိဘူး” “မသိသေးရငျ သိအောငျ ထပျလုပျပေးမယျ” မငျးမငျးက ပွောရငျးနဲ့ထပျလိုးမယျ့ဟနျပွငျတော့ မိသျောလနျ့သှားတယျ။ယောကျြားတဈယောကျရဲ့လီးနဲ့အလိုးခံရတဲ့အရသာက ကောငျးလှနျးပမေယျ့ လောလောဆယျ အပြိုရညျဖကျြခံထားရတဲ့သူ့စောကျဖုတျလေးက ကြိနျးစပျနတောမို့ မငျးမငျးရဲ့ဆန်ဒကိုငွငျးဆနျဖို့ဆုံးဖွတျလိုကျတယျ။
“ကောငျးပါတယျ ကိုကွီးရ ဒါပမေယျ့စပျနလေို့ နောကျမှလုပျတော့နျော” “ဒါဆိုရသှေားခြိုးရအောငျလေ” “ကိုကွီး အရငျသှားခြိုးပါ ညီမလေးဟငျးအိုးတှပွေနျနှေးလိုကျအုံးမယျ..ပွီးရငျ ဒီစောငျတှလေညျးလြှျောရအုံးမှာ” မငျးမငျးလညျး မိသျောကိုချေါလို့မရတာနဲ့တဈယောကျတညျးရတေဝကွီး ခြိုးပဈလိုကျတယျ။မငျးမငျးထမငျး စားပွီးတော့ မိသျောကရခြေိုးပွီးလို့အခနျးတံခါးပိတျပွီးအိပျနတောမို့သူလညျး သူရအခနျးထဲဝငျပွီး အိပျလိုကျတာပေါ့။အိပျမကျထဲမှာ မိသျောနဲ့နောကျတဈခြီဆျောနတေုနျးတယျလီဖုနျး မွညျသံကွောငျ့လနျ့နိုးသှားတယျ။အဲဒါနဲ့မကျြနှာထသဈပွီး ဧညျ့ခနျးကိုထှကျလာခဲ့လိုကျတော့ မိသျောဖုနျးပွောပွီးသှားပွီ။
“ဘယျကဖုနျးလဲ မိသျော” “အမဆေကျတာပါ သူတို့အပွနျနောကျကမြယျလို့လှမျးပွောတာ” “ကောငျးတာပေါ့ မိသျောနဲ့ကိုကွီး လှတျလှတျလပျလပျ နလေို့ရတာပေါ့” “အာ …ကိုကွီးနျော ဘယျသူကနမေယျလို့ပွောလဲ” မိသျောက မကျြစောငျးထိုးပွီး ငွငျးဆနျသလိုပွောပမေယျ့ သူမလညျးထပျခံစားခငျြနမှေနျး အသံတှကေဖျောပွနတေယျ။မငျးမငျးကလညျးရိပျမိတော့ မိသျောကိုဖကျပွီး အနမျးတဈပှငျ့ခြှလေိုကျတယျ။“မိသျော..ပိပိ ဘယျလိုနလေဲ နာနတေုနျးလား” “အငျး နညျးနညျးစပျနသေေးတယျ” “ကိုကွီး ကွညျ့ပေးမယျလေ” မငျးမငျးထိုငျခံအောကျကိုဆငျးထိုငျပွီး မိသျောရဲ့ဂါဝနျကိုလှနျလိုကျတော့ စောကျဖုတျလေးက ပနျးရောငျသနျးပွီး ခဈြဖို့ကောငျးနပွေနျတယျ။
မငျးမငျးစိတျတှလေညျးကွှလာပွီး မိသျောရဲ့ပေါငျတှငျးသားတှကေိုနမျးပေးလိုကျတယျ..မငျးမငျးရဲ့အနမျးလေးတှကွေောငျ့မိသျောတဈယောကျး ကာမစိတျတှတေဟုနျးဟုနျးထလာကာပေါငျတှတေဖွညျးဖွညျးကားပေးလာတော့တယျ။မငျးမငျးက နမျးပေးနရေငျးကနေ လကျညိုးလေးနဲ့အကှဲကွောငျးလေးတဈလြှောကျပှတျပေးလိုကျပွနျတယျ..မိသျောရဲ့စောကျဖုတျကလေးမှာလညျး တဖွညျးဖွညျးနဲ့စောကျရတှေစေိုရှဲလာတာပေါ့..မငျးမငျးလညျး နောကျတဈဆငျ့တကျကာ နှတျခမျးသားလေးကိုဖွဲပွီး စောကျစိကိုလကျနဲ့ကလိပေးလိုကျတော့ မိသျောတဈယောကျ ဘယျလိုမှ မနနေိုငျတော့ပဲ တငျပါးတှပေါ ကော့တကျလာတော့တယျ။မိသျောရဲ့အဖုတျလေးကတော့ စောကျရတှေခြေောငျးစီးလို့ပေါ့..မငျးမငျးက စောကျစိကိုကလိပေးနတောကိုရပျပွီး လြှာထိပျလေးနဲ့စောကျဖုတျအတှငျးထဲထိုးမှလေိုကျ၊စောကျစိလေးကို ဆှဲစုပျလိုကျ၊စောကျဖုတျကှဲကွောငျးတလြှောကျလြှာပွားကွီးနဲ့ပှတျဆှဲလိုကျ လုပျပေးတဲ့အခြိနျမှာတော့ မိသျောတဈယောကျမကျြလုံးတှစေငျးကာ..မငျးမငျးဆံပငျတှကေို တငျးကပျြစှာဆုပျထားနမေိတော့တယျလေ။
“အား.. ရှီး ကောငျးလိုကျတာ ကိုကွီးရေ..အား.. ဟငျး” မငျးမငျးလညျး တတျသညျ့ပညာမနသောဆိုသလို ပညာတှေ အစှမျးကုနျထုတျသုံးတယျ..အဖုတျကို လြှာနဲ့ကလိပေးရာကနေ ခကျြကိုပွောငျးကလိပေးလိုကျတယျ..ပွီးတော့ ခပျြရပျနတေဲ့ဗိုကျသားဖွူလှလှလေးကို ခပျဖှဖှလေး အနမျးတှပေေးတော့ မိသျောရဲ့ညညျးသံတှကေ ကယျြလာသလို ဆံပငျကိုဆုကျထားတဲ့လကျတှကေလညျး ပိုတငျးကပျြလာတယျ..မငျးမငျးရဲ့လကျတှကေတော့ မိသျာ ပေါငျလေးတှကေို ပှတျပေးလိုကျ နို့လေးတှကေို ခပြေေးလိုကျနဲ့အဆကျမပွတျလှုပျရှားပေးတော့ မိသျောတဈယောကျ တှနျ့တှနျ့လူးနတေော့တာပေါ့။ မိသျော ခံစားမှု အရမျးကောငျးနတောသိတော့ မငျမငျးက စောကျစိကို လြှာနဲ့ပွနျကလိပေးပွီး စောကျဖုတျထဲကို လကျညှိုးထညျ့ကာဆော့ကစားပေးလိုကျတဲ့ခဏမှာ မိသျောတဈယောကျ တဈကိုယျလုံးတုနျတကျပွီး ငွိမျကသြှားတော့တယျ။
မိသျောတဈခြီပွီးသှားပွနျပွီပေါ့…မိသျောပွီးသှားတော့ မငျးမငျးက မိသျောဘေးကိုဝငျထိုငျလိုကျပွီး နှုတျခမျးလေးကိုနမျးလိုကျကာ မိသျောရဲ့လကျကို သူ့ငပဲပျေါတငျပေးလိုကျတယျ။အဲဒီအခြိနျမှာ ငပဲက မာတောငျပွီး ပုဆိုးအောကျကနေ ထောငျထှကျနပွေီ။မိသျောက မငျးမငျးရဲ့လီးကိုကိုငျပွီး မကျြလုံးပွူးပွတယျ.. “အောငျမလေး..ကွောကျစရာကွီး” “မယဉျသေးလို့ပါ ..ညီမလေးက ယဉျပါးလာအောငျလုပျပေးလိုကျလေ”လို့ပွောပွီး မငျးမငျးပုဆိုးခြှတျလိုကျတယျ.. ပွောငျလကျနတေဲ့ဒဈကွီးတဝငျးဝငျးနဲ့လီးကွီးက အကွောတှထေောငျလို့မိသျောလကျထဲမှာ ရမျးခါနတေယျ။မိသျောက လီးကို အပျေါအောကျပှတျသတျပွီးဂှငျးတိုကျပေးနကော ကနျြတဲ့လကျတဖကျနဲ့ဂှေးဥကိုဆော့ကစားပေးနတောမို့မငျးမငျးတဈယောကျ အရသာတှကေ့ာမကျြလုံးလေးမှိတျပွီး ဇိမျခံနတေယျ။
မိသျောက မရဲတရဲ ပှတျပေးနရောကနေ တငျးတငျးလေးဆုပျကိုငျပွီး ဂှငျးတိုငျပေးတာတှသှေကျလာတယျ.. “မိသျော..ကိုကွီးလီးကို စုပျပေးပါလား” “အာ.အကွီးကွီးပဲ ပါးစပျထဲမှာ ဆနျ့မှာမဟုတျဘူး ပွီးတော့ လုပျလညျးမလုပျတတျဘူး” “ဆနျ့ပါတယျ ညီမလေးရ ဒီမှာကွညျ့” မငျးမငျးက ရီမုတျကိုလှမျးယူကာ တီဗီကို ဖှငျ့လိုကျပွီး ပုလှပေေးသောအခနျးကို ပွလိုကျသညျ..အင်ျဂလိပျမက လီးကွီးကို ပယျပယျနယျနယျစုပျနသေညျမှာ သှားရညျတှတေမွမွကလြကျြ။လိငျတံတလြှောကျ လြှာနဲ့ယကျပေးလိုကျ၊ဒဈကို လြှာဖြားလေးနဲ့ကလိပေးလိုကျ ပါးစပျထဲ ငုံပေးလိုကျ ဂှေးဥတှကေိုယကျလိုကျ စုပျလိုကျ လုပျနတောကို ကွညျ့ရတော့ မငျးမငျးလညျး လီးစုပျပေးတာခံခငျြတဲ့စိတျက မထိနျးနိုငျတော့ပဲ သူ့လီးကွီးကို မိသျော ရှကေို့တိုးပေးလိုကျတယျ။
မိသျောက မကျြစိရှကေို့ရောကျလာတဲ့အကွောပွိုငျးပွိုငျးနဲ့ပဈတော့မယျ့ဒုံးပြံကွီးလိုတာစူနတေဲ့ လီးကွီးကို မွငျတော့ လိငျစိတျတှကေ ပွနျကွှလာတယျ…အင်ျဂလိပျမကလညျး လီးစုပျနတော အားရစရာ မွငျနရေတာမို့သူလညျးစမျးကွညျ့ခငျြလာတယျ..ပွီးတာ့ မငျးမငျးက သူ့ပိပိလေးကိုယကျပေးတဲ့အခြိနျမှာ လပေျေါပြံနရေသလို ခံစား၇တာဆိုတော့ သူမက မငျးမငျးလီးကို ပွနျစုပျပေးရငျ မငျးမငျးလညျးကောငျးမှာပဲ လို့တှေးမိတာမို့ မငျးမငျးလီးကို ပါးစပျထဲ ငုံကာ သူမတတျသမြှ မှတျသမြှ ပွုစုပေးနမေိတယျ..
မငျးမငျးကတော့ မိသျောရဲ့အပွုအစုတှကွေောငျ့ဖီးတှတေကျပွီး တအားအား ….တရှီးရှီး နဲ့အသံတှတေောငျထှကျလာတယျ..ဇာတျကားထဲမှ အင်ျဂလိပျမနဲ့အပွိုငျပုလှမှေုတျပေးနတေဲ့မိသျောတဈယောကျမှာတော့ မိနျးမ အထာကြှမျးလှတဲ့မငျးမငျးရဲ့ဖငျဝကို ကလိပေးမှု၊နို့သီးခေါငျးတှကေို ပှတျခပြေေးမှု ၊စောကျစိကို ဆော့ပေးမှုတှကွေောငျ့ စျောကဖုတျထဲက စျောရညျကွညျတှေ တစိမျ့စိမျ့ထှကျလာတော့တယျ.. “ညီမလေး ကိုကွီး အရမျးလိုးခငျြနပွေီ လိုးကွရအောငျ” “အငျး” မပှငျ့တပှငျ့နဲ့ပွောတဲ့မိသျောရဲ့ဖွသေံအဆုံးမှာ မငျးမငျးက မိသျောကိုစားပှဲမှာ လကျတောကျခိုငျးပွီး နောကျကနဆေောငျ့သှငျးလိုကျတယျ။
မိသျောလေးဘကျကုနျးလိုကျတော့ စှငျ့ကားပွီးဖွူဖှေးနတေဲ့ဖငျလုံးကွားကနေ စောကျဖုတျကွီးကနောကျကို ပွူးထှကျလာတယျ..သားကောငျမွငျလိုကျတဲ့ကြားရိုငျးတဈကောငျလို လီးကွီးက မာနျဖီပွီး ပိုတောငျလာတယျ.စောကျဖုတျလေးကိုတဲ့ပွီးထညျ့လိုကျတဲ့အခြိနျမှာတော့ ပွှတျဆိုတဲ့အသံနဲ့အတူ လီးကစောကျဖုတျထဲကိုစီးခနဲ ဝငျသှားတယျ.. “ကိုကွီးဟာက ညီမလေး ဟာထဲမှာ ပွညျ့ကပျြနတောပဲ” “ပွနျထုတျလိုကျရမှာလား” “ရတယျမထုတျနဲ့ဆကျလုပျ ညီမလေးခံနိုငျပါတယျ” မငျးမငျးက နောကျဖကျကိုပွူးထှကျနတေဲ့မိစျောစောကျဖုတျကွီးကို တဈခကျြခငျြးမှနျမှနျလေးဆောငျ့ပေးသလို မိသျောကလညျး အံကွိတျခံကာဖငျကိုနောကျဘကျသို့ကော့ပေးကာစီးဝါးညီညာစှာ လိုးနကွေသညျ။
ဗွှတျ အိအိ ဟငျ့ဟငျ့ ဘှတျ ဘှတျ အသံမြိုးစုံ ထှကျပျေါကာ ကာမအရသာကို ကောငျးကောငျးကွီး ခံစားကွ၏။ “အား အား အငျ့ အငျ့ ကောငျးတယျကိုကွီး ဆောငျ့ဆောငျ့” စောကျခေါငျးကဉျြးကဉျြးလေးကို လိုးနရေတာကွောငျ့ အရသာတှလှေ့တဲ့အတှကျ မငျးမငျးဆောငျ့ခကျြတှကေ ပွငျးလာပွီး တရစပျတှယျတော့သညျ…မိသျောက လညျးအလြှော့မပေးဘဲ သူမ၏ဖငျလုံးကွီးကို အားကွိုးမာနျတကျပွနျပွနျကော့ပေးရာ ဆောငျ့လိုကျတိုငျးဖငျဖှေးဖှေးကွီးက တုနျတုနျတကျသှားပွနျ၏။ မငျးမငျးက စောကျဖုတျကိုမညှာမတာဆောငျ့လိုးသလို
တဈခါတဈခါ မိသျောရဲ့လညျတိုငျတှနေမျးပေးပွီး နို့တှကေိုပါဆော့ကစားတဲ့အတှကျ မိသျောတဈယောကျ ကောငျးရငျးကောငျးလာပွနျတယျ။ “ဗှတျ ..ဗွဈ… ဘှတျ အငျ့.. အငျ့ ဒုတျ ဒုတျ …ဟငျ့ အာ့ ..ပလှတျ ပလှတျ” “အား..ကောငျးတယျ အား ဟငျ့ အရမျးကောငျးလာပွီ ” “ကိုကွီး မနားနဲ့ နာနာဆောငျ့ကိုကွီး ညီမလေး ပွီးတော့မယျ အငျးးးးးးးးးဟငျးး……” သကျပွငျးရညျကွီးခပြွီး မိသျောဖငျကွီးယမျးသှားတဲ့အခြိနျမှာ မငျးမငျးက သူ့ဆောငျ့ခကျြကိုအစှမျးကုနျတငျပွီး ဆောငျ့လိုကျကာ သုတျရညျမြားကို စောကျခေါငျးထဲပနျးထညျ့လိုကျတော့တယျ။
ကလင်” “ကလင်” ခေါင်းလောင်းသံကြောင့် သော်သော်စမ်းတစ်ယောက်ကောင်းခန်းရောက်မှမီးပြတ်သွားရသည်။အိမ်မှာဘယ်သူမှမရှိတုန်း အောကားကြည့်ပြီး အမှန်အကန်သွားတိုက်နေတာ ခေါင်းလောင်းသံကြောင့်ဖီးငုတ်သွားရခြင်းပင်။ “အရေးထဲဘယ်သူလဲမသိပါဘူး” တီဗီကိုပိတ်ပြီး အပြင်ကိုထွက်ကြည့်လိုက်တော့ သူ့အစ်ကိုဝမ်းကွဲ မင်းမင်းရောက်လာတာဖြစ်သည်။သော်သော်စမ်း၏ အဒေါ်ဘက်မှ စပ်ပါမှ တော်သော ဆွေမျိုးဆိုပေမယ့် ငယ်ငယ်တည်းက သူ့ကို အလိုအလိုက်ဆုံးမို့အစ်ကိုတွေထဲမှာ မင်းမင်းကို အချစ်ဆုံးဖြစ်သည်။
“ကိုကြီးပါလား လာလေ ပေါ်မလာတာတောင်ကြာပြီ ဖုန်းလည်းမဆက်ဘူး နေမကောင်းများဖြစ်နေလားဆိုပြီးစိတ်ပူနေကြတာ ခုရော အလုပ်ကိစ္စနဲ့လာတာပဲလား” “လာမလို့ပါပဲ အလုပ်တွေရှုပ်နေလို့.အိမ်သားတွေအားလုံးလည်းသတိရပါတယ် အထူးသဖြင့် ငါ့ညီမလေးကိုပေါ့ အဲဒါကြောင့်လည်း အလုက်ကိစ္စအကြောင်းပြပြီးတမင်လာတာ ” “ခုမှလာပြောနေတယ် သူများကို ဖုန်းမဆက်ပဲပစ်ထားပြီးတော့” “တကယ်မအားလို့ပါ စိတ်မကောက်နဲ့တော့ မုန့်တွေအများကြီးဝယ်လာတယ်” “မုန့်ကျွေးရုံနဲ့ မရဘူး ညီမလေးသွားချင်တဲ့နေရာတွေကို လိုက်ပို့ပေးရမယ်” “ကောင်းပါပြီဗျာ လိုက်ပို့ပေးမယ်ဟုတ်ပလား ” “ဟေး ဒါမှတို့ကိုကြီးကွ” သော်သော်စမ်းတစ်ယောက်ပျော်သွားပြီး သူ့အစ်ကိုကို အနမ်းတစ်ပွင့်ပေးပြီး ဂုဏ်ပြုလိုက်သည်။ကိုကြီးထမင်းမစားရသေးဘူးမဟုတ်လား ညီမလေးခူးလိုက်မယ်နော်” “အေးအေး ထမင်းအရင်စားလိုက်မယ် နောက်မှရေချိုးတော့မယ်”
“ဒါနဲ ခုဏက အိပ်နေတာလား ဘယ်သူမှလည်းမရှိကြဘူး ဘယ်သွားကြလဲ” “ညီမလေးပျင်းလို့တီဗီကြည့်နေတာ အဖေကကြီးကြီးနေမကောင်းလို့ရွာပြန်သွားတယ် အမေနဲ့ဒေါ်လေးကတော့ထုံးစံအတိုင်းဗေဒင်ဆရာဆီ သွားကြလေရဲ့ ” “သူရရောလိုက်သွားတာလား” “မောင်လေးလား မလိုက်ပါဘူး သူ့သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ဘုရားဖူးသွားကြတာ မနက်ဖြန်မှပြန်ရောက်မယ်” သော်သော်စမ်းထမင်းပွဲပြင်ရန်ထွက်သွားတော့ မင်းမင်းလည်းတီဗီကိုဖွင့်ကြည့်လိုက်မိသည်။
အဖြူကောင်နှင့်ကောင်နှင့်ကောင်မတစ်ယောက်ပယ်ပယ်နယ်နယ်လိုးနေကြပုံကပေါ်လာ၏။မင်းမင်းအံ့သြသွားရသည်။မိသော်က အရွယ်ရောက်နေပြီဆိုပေမယ့် ဒီလိုကားတွေကြည့်လိမ့်မည်ဟုမထင်ထားခဲ့။ခုတော့ သူ့ညီမကြည့်နေတာ ရိုးရိုးအချစ်ဇာတ်ကား မဟုတ်ပဲ ပွင့်လင်း အချစ်ဇာကြမ်းဖြစ်နေသည်။သူလည်း အသွေးနဲ့အသားနဲ့ဆိုတော့ကြည့်ချင်ရှာမပေါ့လေလို့ဖြေတွေးပြီး ကြည့်လက်စဇာတ်ကားကို ဆက်ကြည့်နေမိတယ်။ “ကိုကြီး ထမင်းစားမယ်” မိသော်ရဲ့ခေါ်သံကြောင့် မင်းမင်းတီဗီကိုပိတ်ခဲ့ပြီး ထမင်းစားခန်းဆီထွက်ခဲ့လိုက်သည်။ထမင်းစားခန်းရောက်မှမိသော်ကိုအသေအချာကြည့်မိတော့သည်။
အိမ်နေရင်းမို့ထင်ပါရဲ့ မိသော်တစ်ယောက် အတွင်းခံအတွင်းခံမပါဘူး။ဝတ်ထားတဲ့တီရှပ်ပါးပါးလေးအောက်မှာ နို့သီးခေါင်းလေးတွေကို မြင်နေရတယ်။မင်းမင်းလည်းစိတ်ရိုင်းတွေဝင်လာပြီး မိသော်ကို နောက်ကနေပွေ့ဖက်လိုက်တယ်။ “မိသော်အရမ်းချောလာတယ်” “ကိုကြီးကလည်းမြှောက်နေပြန်ပြီ..မချောဘူးပြောလည်း ထမင်းကျွေးပါတယ်နော်” အဲလိုပြောနေရင်းပဲ မိသော်ဆီကခေါင်းလျှော်ရည်နံ့ သင်းသင်းလေးတွေရယ်၊စကပ်တိုလေးအောက်က တင်းသားနုနုအိအိလေးတွေရဲ့အထိအတွေ့တွေကြောင့် မင်းမင်းရဲ့ငပဲက အမောက်ထောင်လာလေသည်။
မိသော်လည်း ငပဲကြီးရဲ့မာကျောတဲ့အထိအတွေ့ကြောင့်ပဲ အဖုတ်ထဲမှာအရည်တွေစိုလာပြီး မခံမရပ်နိုင်ဖြစ်လာတော့၏။ … ပထမဆုံးစရေးတဲ့ဇာတ်လမ်းမို့အမှာအယွင်းများရှိခဲ့လျှင်သော်လည်ကောင်း၊အရေးအသားများညံ့ဖျင်းနေလျှင်သော်လည်းကောင်း အထူးတလည်တောင်းပန်ပါ၏။အပေါ်တန်းကို သွားချင်လှပါသောကြောင့် အပေါင်းဗုတ်ကလေးများချီးမြှင့်မှုကိုစောင့်မျှော်လျက်ပါ.. မင်းမင်းကမိသော်လည်တိုင်ကို ဖွဖွလေးနမ်းလိုက်တဲ့အချိန်မှာ မိသော်မျက်လုံးလေးတွေစင်းပြီး ဖင်လေးကိုကော့ကာ မင်းမင်းရဲ့လီး ကိုပြန်ပွတ်ပေးနေမိတယ်။ မင်းမင်း လည်း မိသော်ရဲ့တီရှပ်အင်္ကျီအောင်ကို လက်လျှိုထည့်ပြီး နို့တွေကို ပွတ်ပေးတာပေါ့။အပျိုစင်နုနုထွတ်ထွတ်ရဲ့နို့မို့ကိုင်လို့အရမ်းကောင်းတယ်။နို့သီးခေါင်းတွေက တဖြည်းဖြည်းနဲ့ထောင်တက်လာတယ်။
မင်းမင်းရဲ့လီးကလည်းဘောင်းဘီပေါက်ထွက်မတတ်မာန်တက်နေပြီမို့ ထမင်းဝိုင်းကို အုပ်ခဲ့ကာ မိသော်ကိုပွေ့ချီပြီး အိပ်ခန်းဆီချီတက်ခဲ့လိုက်သည်။အခန်းထဲရောက်တော့နှစ်ယောက်လုံး ဝတ်လစ်စလစ်ဖြစ်သွားပြီး မိသော်က ကုတင်ပေါ်မှာပက်လက်ကလေး။မိသော်ရဲ့အကြည့်တွေထဲမှာ မင်းမင်းရဲ့လီးကိုဆာလောင်တောင့်တမှုတွေပါနေတယ်..အမွှေးရိတ်ထားတဲ့စောက်ဖုတ်ဖြူဖြူဖောင်းဖောင်းလေးမှာ စောက်ရည်တွေစိုရွဲနေတာအများကြီးပါပဲ။ မင်းမင်းရဲ့ပြဲလန်နေတဲ့ဒစ်ကြီးကို မြင်တော့ မိသော်တစ်ချက်တွန့်သွားပေမယ့် အဲဒီလီးကြီးစောက်စိလေးကိုပွတ်ပေးခံရတဲ့အခါမှာတော့ ကြောက်စိတ်တွေပျောက်ပြီး ညည်းသံလေးတွေထွက်လာတော့သည်။မိသော်က အလိုးခံချင်စိတ်တွေမုန်ယိုနေတာသိတော့ မင်မင်းလည်း အချိန်ဆွဲမနေပဲသူ့ရဲ့ကြီးမားလှတဲ့လီးကြီးကို စောက်ဖုတ်ထဲထိုးထည့်လိုက်တော့တယ်။
လီးကြီးက မဝင်ပဲထစ်နေသည်။သေချာသွားပြီ..မိသော်ရဲ့ပန်းဦးကို သူစားသုံးရတော့မည်။မိသော်ကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တော့ အံကြိတ်ထားပြီး ဝင်လာမယ့် ညီလေးကိုစောင့်မျှော်နေတယ်။မင်းမင်းက ချက်ချင်းမထည့်သေးပဲ အာရုံပြောင်းသွားအောင် နို့စို့ပေးလိုက်တယ်…ခဏကြာမှ ဆတ်ခနဲဆောင့်သွင်းလိုက်တော့ မိသော်ဆီက “အား” လို့အော်သံတစ်ချက်ထွက်လာတယ် “နာလို့လား မိသော်” “ရတယ်ကိုကြီး မြန်မြန်လုပ်ပါတော”့ လို့မိသော်က ပြောပေမယ့် သူ့ခမျာနာလွန်းတော့ မျက်နှာလေးကမဲ့နေတယ်။
မင်းမင်းက မိသော်ကိုသနားတာကြောင့် တဝက်လောက်ဝင်နေတဲ့လီးကိုဆက်မသွင်းသေးပဲ နှုတ်ခမ်းလေးကိုဆွဲစုပ်ပြီးလျှာနဲ့ကလိပေးနေမိတယ်..လက်တွေကလည်း မိသော်တကိုယ်လုံးကို ပွတ်သပ်ပေါ်ရင်းပေါ့..ပြီးမှ ဖြည်းဖြည်းချင်းအသွင်းအထုတ် လုပ်လိုက်တယ်..မင်းမင်းက နှဲ့သွင်းလိုက် မိသော်က အော်လိုက် ညည်းလိုက်နဲ့ ထည့်လိုက်တာ မိသော်ရဲ့စောက်ဖုတ်ထဲကို လီးကြီးတစ်ဆုံးဝင်သွားတဲ့အချိန်မှာ နှစ်ယောက်လုံး ချွေးတွရွှဲနေကြပြီ။လီးတဆုံးဝင်သွားတော့ မင်းမင်းက အရှိန်နည်းနည်းမြှင့်လိုက်တာတယ်..အကြောပြိုင်းပြိင်းနဲ့သန်မာလှတဲ့လီးကြီးရဲ့စောက်ဖုတ်အတွင်းသားတွေကိုပွတ်တိုက်မှုကြောင့် မိသော်တစ်ယောက် ခံစားမှုရသတွေတက်လာကာ ညည်းသံလေးတွေထွက်ပေါ်လာတော့တယ်.
အပျိုစင်လေးရဲ့စောက်ဖုတ်စီးစီးလေးကိုလိုရတဲ့မင်းမင်းလည်း စောက်ဖုတ်အတွင်းသားတွေရဲ့ဆွဲစုပ်မှုကြောင့်ပြီးချင်စိတ်ကိုမနည်းထိန်းထားရတယ်..ဆောင့်လိုက်တိုင်း ဆောင့်လိုက်တိုင်း မိသော်က အောက်ကနေကော့ကော့ပေးနေတာမို့လုပ်ရတာဟန်ချက်ညီလှသည်..ပြီးတော့ လီးနဲ့စောက်ဖုတ်ထိလိုက်တိုင်း တပြွတ်ပြွတ်နဲ့ထွက်ပေါ်လာတဲ့အသံတွေကလည်း နှစ်ဦးလုံးရဲ့ကာမစိတ်တွေကို ပိုပြီးပြင်းထန်လာစေပြန်သည်… “ကိုကြီး ကောင်းတယ် ဆောင့်ဆောင့်” “သွက်သွက်လေးဆောင့်” မိသော်ကအရှိန်မြှင့်ဖို့စေ့ဆော်လာတာမို့မင်မင်းလည်း အရှိန်ကိုတင်ကာခပ်ပြင်းပြင်းလေးအားရပါးရဆောင့်ပေးလိုက်သည်..
“အင်း …အင်း..ကောင်းတယ်..ကောင်းတယ်..သွက်သွက်လေး ပြီးတော့မယ်…ပြီးတော့မယ်” “ဟင်းးး………..” မိသော်တစ်ယောက်သက်ပြင်းချပြီး ငြိမ်ကျသွားတော့ မင်းမင်းလည်းစိတ်ကိုလွှတ်ပြီး အသားကုန်ကြုံးပစ်လိုက်တာ သူလည်းပြီးသွာတော့တယ်။နှစ်ယောက်လုံး ဆန္ဒတွေပြည့်ဝသွားကြပြီဆိုတော့ တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက်ဖက်ပြီး ကုတင်ပေါ်မှာ ခဏအနားယူလိုက်ကြသည်။ … စာရိုက်တာမမြန်တာမို့ပို့စ်တင်တာနှေးနေရတာကို ခွေးလွှတ်ကြပါ….သနားသောအားဖြင့်လည်း ဗုတ်များစောင်မကြပါဗျို့“မိသော် ကောင်းလား” “သိဘူး” “မသိသေးရင် သိအောင် ထပ်လုပ်ပေးမယ်” မင်းမင်းက ပြောရင်းနဲ့ထပ်လိုးမယ့်ဟန်ပြင်တော့ မိသော်လန့်သွားတယ်။ယောကျာ်းတစ်ယောက်ရဲ့လီးနဲ့အလိုးခံရတဲ့အရသာက ကောင်းလွန်းပေမယ့် လောလောဆယ် အပျိုရည်ဖျက်ခံထားရတဲ့သူ့စောက်ဖုတ်လေးက ကျိန်းစပ်နေတာမို့ မင်းမင်းရဲ့ဆန္ဒကိုငြင်းဆန်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။
“ကောင်းပါတယ် ကိုကြီးရ ဒါပေမယ့်စပ်နေလို့ နောက်မှလုပ်တော့နော်” “ဒါဆိုရေသွားချိုးရအောင်လေ” “ကိုကြီး အရင်သွားချိုးပါ ညီမလေးဟင်းအိုးတွေပြန်နွှေးလိုက်အုံးမယ်..ပြီးရင် ဒီစောင်တွေလည်းလျှော်ရအုံးမှာ” မင်းမင်းလည်း မိသော်ကိုခေါ်လို့မရတာနဲ့တစ်ယောက်တည်းရေတဝကြီး ချိုးပစ်လိုက်တယ်။မင်းမင်းထမင်း စားပြီးတော့ မိသော်ကရေချိုးပြီးလို့အခန်းတံခါးပိတ်ပြီးအိပ်နေတာမို့သူလည်း သူရအခန်းထဲဝင်ပြီး အိပ်လိုက်တာပေါ့။အိပ်မက်ထဲမှာ မိသော်နဲ့နောက်တစ်ချီဆော်နေတုန်းတယ်လီဖုန်း မြည်သံကြောင့်လန့်နိုးသွားတယ်။အဲဒါနဲ့မျက်နှာထသစ်ပြီး ဧည့်ခန်းကိုထွက်လာခဲ့လိုက်တော့ မိသော်ဖုန်းပြောပြီးသွားပြီ။
“ဘယ်ကဖုန်းလဲ မိသော်” “အမေဆက်တာပါ သူတို့အပြန်နောက်ကျမယ်လို့လှမ်းပြောတာ” “ကောင်းတာပေါ့ မိသော်နဲ့ကိုကြီး လွတ်လွတ်လပ်လပ် နေလို့ရတာပေါ့” “အာ …ကိုကြီးနော် ဘယ်သူကနေမယ်လို့ပြောလဲ” မိသော်က မျက်စောင်းထိုးပြီး ငြင်းဆန်သလိုပြောပေမယ့် သူမလည်းထပ်ခံစားချင်နေမှန်း အသံတွေကဖော်ပြနေတယ်။မင်းမင်းကလည်းရိပ်မိတော့ မိသော်ကိုဖက်ပြီး အနမ်းတစ်ပွင့်ချွေလိုက်တယ်။“မိသော်..ပိပိ ဘယ်လိုနေလဲ နာနေတုန်းလား” “အင်း နည်းနည်းစပ်နေသေးတယ်” “ကိုကြီး ကြည့်ပေးမယ်လေ” မင်းမင်းထိုင်ခံအောက်ကိုဆင်းထိုင်ပြီး မိသော်ရဲ့ဂါဝန်ကိုလှန်လိုက်တော့ စောက်ဖုတ်လေးက ပန်းရောင်သန်းပြီး ချစ်ဖို့ကောင်းနေပြန်တယ်။
မင်းမင်းစိတ်တွေလည်းကြွလာပြီး မိသော်ရဲ့ပေါင်တွင်းသားတွေကိုနမ်းပေးလိုက်တယ်..မင်းမင်းရဲ့အနမ်းလေးတွေကြောင့်မိသော်တစ်ယောက်း ကာမစိတ်တွေတဟုန်းဟုန်းထလာကာပေါင်တွေတဖြည်းဖြည်းကားပေးလာတော့တယ်။မင်းမင်းက နမ်းပေးနေရင်းကနေ လက်ညိုးလေးနဲ့အကွဲကြောင်းလေးတစ်လျှောက်ပွတ်ပေးလိုက်ပြန်တယ်..မိသော်ရဲ့စောက်ဖုတ်ကလေးမှာလည်း တဖြည်းဖြည်းနဲ့စောက်ရေတွေစိုရွှဲလာတာပေါ့..မင်းမင်းလည်း နောက်တစ်ဆင့်တက်ကာ နှတ်ခမ်းသားလေးကိုဖြဲပြီး စောက်စိကိုလက်နဲ့ကလိပေးလိုက်တော့ မိသော်တစ်ယောက် ဘယ်လိုမှ မနေနိုင်တော့ပဲ တင်ပါးတွေပါ ကော့တက်လာတော့တယ်။မိသော်ရဲ့အဖုတ်လေးကတော့ စောက်ရေတွေချောင်းစီးလို့ပေါ့..မင်းမင်းက စောက်စိကိုကလိပေးနေတာကိုရပ်ပြီး လျှာထိပ်လေးနဲ့စောက်ဖုတ်အတွင်းထဲထိုးမွှေလိုက်၊စောက်စိလေးကို ဆွဲစုပ်လိုက်၊စောက်ဖုတ်ကွဲကြောင်းတလျှောက်လျှာပြားကြီးနဲ့ပွတ်ဆွဲလိုက် လုပ်ပေးတဲ့အချိန်မှာတော့ မိသော်တစ်ယောက်မျက်လုံးတွေစင်းကာ..မင်းမင်းဆံပင်တွေကို တင်းကျပ်စွာဆုပ်ထားနေမိတော့တယ်လေ။
“အား.. ရှီး ကောင်းလိုက်တာ ကိုကြီးရေ..အား.. ဟင်း” မင်းမင်းလည်း တတ်သည့်ပညာမနေသာဆိုသလို ပညာတွေ အစွမ်းကုန်ထုတ်သုံးတယ်..အဖုတ်ကို လျှာနဲ့ကလိပေးရာကနေ ချက်ကိုပြောင်းကလိပေးလိုက်တယ်..ပြီးတော့ ချပ်ရပ်နေတဲ့ဗိုက်သားဖြူလွလွလေးကို ခပ်ဖွဖွလေး အနမ်းတွေပေးတော့ မိသော်ရဲ့ညည်းသံတွေက ကျယ်လာသလို ဆံပင်ကိုဆုက်ထားတဲ့လက်တွေကလည်း ပိုတင်းကျပ်လာတယ်..မင်းမင်းရဲ့လက်တွေကတော့ မိသာ် ပေါင်လေးတွေကို ပွတ်ပေးလိုက် နို့လေးတွေကို ချေပေးလိုက်နဲ့အဆက်မပြတ်လှုပ်ရှားပေးတော့ မိသော်တစ်ယောက် တွန့်တွန့်လူးနေတော့တာပေါ့။ မိသော် ခံစားမှု အရမ်းကောင်းနေတာသိတော့ မင်မင်းက စောက်စိကို လျှာနဲ့ပြန်ကလိပေးပြီး စောက်ဖုတ်ထဲကို လက်ညှိုးထည့်ကာဆော့ကစားပေးလိုက်တဲ့ခဏမှာ မိသော်တစ်ယောက် တစ်ကိုယ်လုံးတုန်တက်ပြီး ငြိမ်ကျသွားတော့တယ်။
မိသော်တစ်ချီပြီးသွားပြန်ပြီပေါ့…မိသော်ပြီးသွားတော့ မင်းမင်းက မိသော်ဘေးကိုဝင်ထိုင်လိုက်ပြီး နှုတ်ခမ်းလေးကိုနမ်းလိုက်ကာ မိသော်ရဲ့လက်ကို သူ့ငပဲပေါ်တင်ပေးလိုက်တယ်။အဲဒီအချိန်မှာ ငပဲက မာတောင်ပြီး ပုဆိုးအောက်ကနေ ထောင်ထွက်နေပြီ။မိသော်က မင်းမင်းရဲ့လီးကိုကိုင်ပြီး မျက်လုံးပြူးပြတယ်.. “အောင်မလေး..ကြောက်စရာကြီး” “မယဉ်သေးလို့ပါ ..ညီမလေးက ယဉ်ပါးလာအောင်လုပ်ပေးလိုက်လေ”လို့ပြောပြီး မင်းမင်းပုဆိုးချွတ်လိုက်တယ်.. ပြောင်လက်နေတဲ့ဒစ်ကြီးတဝင်းဝင်းနဲ့လီးကြီးက အကြောတွေထောင်လို့မိသော်လက်ထဲမှာ ရမ်းခါနေတယ်။မိသော်က လီးကို အပေါ်အောက်ပွတ်သတ်ပြီးဂွင်းတိုက်ပေးနေကာ ကျန်တဲ့လက်တဖက်နဲ့ဂွေးဥကိုဆော့ကစားပေးနေတာမို့မင်းမင်းတစ်ယောက် အရသာတွေ့ကာမျက်လုံးလေးမှိတ်ပြီး ဇိမ်ခံနေတယ်။
မိသော်က မရဲတရဲ ပွတ်ပေးနေရာကနေ တင်းတင်းလေးဆုပ်ကိုင်ပြီး ဂွင်းတိုင်ပေးတာတွေသွက်လာတယ်.. “မိသော်..ကိုကြီးလီးကို စုပ်ပေးပါလား” “အာ.အကြီးကြီးပဲ ပါးစပ်ထဲမှာ ဆန့်မှာမဟုတ်ဘူး ပြီးတော့ လုပ်လည်းမလုပ်တတ်ဘူး” “ဆန့်ပါတယ် ညီမလေးရ ဒီမှာကြည့်” မင်းမင်းက ရီမုတ်ကိုလှမ်းယူကာ တီဗီကို ဖွင့်လိုက်ပြီး ပုလွေပေးသောအခန်းကို ပြလိုက်သည်..အင်္ဂလိပ်မက လီးကြီးကို ပယ်ပယ်နယ်နယ်စုပ်နေသည်မှာ သွားရည်တွေတမြမြကျလျက်။လိင်တံတလျှောက် လျှာနဲ့ယက်ပေးလိုက်၊ဒစ်ကို လျှာဖျားလေးနဲ့ကလိပေးလိုက် ပါးစပ်ထဲ ငုံပေးလိုက် ဂွေးဥတွေကိုယက်လိုက် စုပ်လိုက် လုပ်နေတာကို ကြည့်ရတော့ မင်းမင်းလည်း လီးစုပ်ပေးတာခံချင်တဲ့စိတ်က မထိန်းနိုင်တော့ပဲ သူ့လီးကြီးကို မိသော် ရှေ့ကိုတိုးပေးလိုက်တယ်။
မိသော်က မျက်စိရှေ့ကိုရောက်လာတဲ့အကြောပြိုင်းပြိုင်းနဲ့ပစ်တော့မယ့်ဒုံးပျံကြီးလိုတာစူနေတဲ့ လီးကြီးကို မြင်တော့ လိင်စိတ်တွေက ပြန်ကြွလာတယ်…အင်္ဂလိပ်မကလည်း လီးစုပ်နေတာ အားရစရာ မြင်နေရတာမို့သူလည်းစမ်းကြည့်ချင်လာတယ်..ပြီးတာ့ မင်းမင်းက သူ့ပိပိလေးကိုယက်ပေးတဲ့အချိန်မှာ လေပေါ်ပျံနေရသလို ခံစား၇တာဆိုတော့ သူမက မင်းမင်းလီးကို ပြန်စုပ်ပေးရင် မင်းမင်းလည်းကောင်းမှာပဲ လို့တွေးမိတာမို့ မင်းမင်းလီးကို ပါးစပ်ထဲ ငုံကာ သူမတတ်သမျှ မှတ်သမျှ ပြုစုပေးနေမိတယ်..
မင်းမင်းကတော့ မိသော်ရဲ့အပြုအစုတွေကြောင့်ဖီးတွေတက်ပြီး တအားအား ….တရှီးရှီး နဲ့အသံတွေတောင်ထွက်လာတယ်..ဇာတ်ကားထဲမှ အင်္ဂလိပ်မနဲ့အပြိုင်ပုလွေမှုတ်ပေးနေတဲ့မိသော်တစ်ယောက်မှာတော့ မိန်းမ အထာကျွမ်းလှတဲ့မင်းမင်းရဲ့ဖင်ဝကို ကလိပေးမှု၊နို့သီးခေါင်းတွေကို ပွတ်ချေပေးမှု ၊စောက်စိကို ဆော့ပေးမှုတွေကြောင့် စော်ကဖုတ်ထဲက စော်ရည်ကြည်တွေ တစိမ့်စိမ့်ထွက်လာတော့တယ်.. “ညီမလေး ကိုကြီး အရမ်းလိုးချင်နေပြီ လိုးကြရအောင်” “အင်း” မပွင့်တပွင့်နဲ့ပြောတဲ့မိသော်ရဲ့ဖြေသံအဆုံးမှာ မင်းမင်းက မိသော်ကိုစားပွဲမှာ လက်တောက်ခိုင်းပြီး နောက်ကနေဆောင့်သွင်းလိုက်တယ်။
မိသော်လေးဘက်ကုန်းလိုက်တော့ စွင့်ကားပြီးဖြူဖွေးနေတဲ့ဖင်လုံးကြားကနေ စောက်ဖုတ်ကြီးကနောက်ကို ပြူးထွက်လာတယ်..သားကောင်မြင်လိုက်တဲ့ကျားရိုင်းတစ်ကောင်လို လီးကြီးက မာန်ဖီပြီး ပိုတောင်လာတယ်.စောက်ဖုတ်လေးကိုတဲ့ပြီးထည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့ ပြွတ်ဆိုတဲ့အသံနဲ့အတူ လီးကစောက်ဖုတ်ထဲကိုစီးခနဲ ဝင်သွားတယ်.. “ကိုကြီးဟာက ညီမလေး ဟာထဲမှာ ပြည့်ကျပ်နေတာပဲ” “ပြန်ထုတ်လိုက်ရမှာလား” “ရတယ်မထုတ်နဲ့ဆက်လုပ် ညီမလေးခံနိုင်ပါတယ်” မင်းမင်းက နောက်ဖက်ကိုပြူးထွက်နေတဲ့မိစော်စောက်ဖုတ်ကြီးကို တစ်ချက်ချင်းမှန်မှန်လေးဆောင့်ပေးသလို မိသော်ကလည်း အံကြိတ်ခံကာဖင်ကိုနောက်ဘက်သို့ကော့ပေးကာစီးဝါးညီညာစွာ လိုးနေကြသည်။
ဗြွတ် အိအိ ဟင့်ဟင့် ဘွတ် ဘွတ် အသံမျိုးစုံ ထွက်ပေါ်ကာ ကာမအရသာကို ကောင်းကောင်းကြီး ခံစားကြ၏။ “အား အား အင့် အင့် ကောင်းတယ်ကိုကြီး ဆောင့်ဆောင့်” စောက်ခေါင်းကျဉ်းကျဉ်းလေးကို လိုးနေရတာကြောင့် အရသာတွေ့လှတဲ့အတွက် မင်းမင်းဆောင့်ချက်တွေက ပြင်းလာပြီး တရစပ်တွယ်တော့သည်…မိသော်က လည်းအလျှော့မပေးဘဲ သူမ၏ဖင်လုံးကြီးကို အားကြိုးမာန်တက်ပြန်ပြန်ကော့ပေးရာ ဆောင့်လိုက်တိုင်းဖင်ဖွေးဖွေးကြီးက တုန်တုန်တက်သွားပြန်၏။ မင်းမင်းက စောက်ဖုတ်ကိုမညှာမတာဆောင့်လိုးသလို
တစ်ခါတစ်ခါ မိသော်ရဲ့လည်တိုင်တွေနမ်းပေးပြီး နို့တွေကိုပါဆော့ကစားတဲ့အတွက် မိသော်တစ်ယောက် ကောင်းရင်းကောင်းလာပြန်တယ်။ “ဗွတ် ..ဗြစ်… ဘွတ် အင့်.. အင့် ဒုတ် ဒုတ် …ဟင့် အာ့ ..ပလွတ် ပလွတ်” “အား..ကောင်းတယ် အား ဟင့် အရမ်းကောင်းလာပြီ ” “ကိုကြီး မနားနဲ့ နာနာဆောင့်ကိုကြီး ညီမလေး ပြီးတော့မယ် အင်းးးးးးးးးဟင်းး……” သက်ပြင်းရည်ကြီးချပြီး မိသော်ဖင်ကြီးယမ်းသွားတဲ့အချိန်မှာ မင်းမင်းက သူ့ဆောင့်ချက်ကိုအစွမ်းကုန်တင်ပြီး ဆောင့်လိုက်ကာ သုတ်ရည်များကို စောက်ခေါင်းထဲပန်းထည့်လိုက်တော့တယ်။
Categorized as အငျးဆကျ Tagged မိသျောရဲအိုး